Iza no mampiasa Twitter? | Martech Zone
Iza no mampiasa Twitter?
Talata, May 12, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany dia panelista tao amin'ny Business Growth Institute ho an'ny Chambre Commerce Indianapolis aho. Nirotsaka an-tsehatra tokoa ny valalabemandry, hany ka somary nasiaka ny adiny 2 hanazavana ny varotra sy ny varotra an-tserasera.
Susan Matthews avy any Borshoff (a mitarika ny masoivoho marika sy marketing amin'ny afovoany andrefana) ary handeha hanaraka aho raha tsy afaka mametaka atrikasa hanohizana ny fandraisana andraikitra sy hamaly tanteraka ny fangatahana rehetra izahay.
Toy ny adihevitra rehetra momba ny varotra sy ny media sosialy, dia somary narahin-dàlana ny resaka Twitter. Nametraka ireto fanontaniana manaraka ireto aho:
Firy ny olona mampiasa Twitter amin'ny orinasany? Tanana vitsivitsy.
Firy ny olona tsy mahalala ny atao hoe Twitter? Tanana vitsivitsy.
Firy ny olona tsy mahalala hoe inona ny Twitter nefa menatra ny manaiky azy io? Hehy fihomehezana maro hafa.
Amin'izao fotoana izao, nisy mpivady iray naneho hevitra momba ny fanombohany mampiasa Twitter. Ny zava-nisy dia fanakorontanana nampientanentana nataon'ny olona momba ny tabataba ao amin'ny Twitter mifanohitra amin'ny fampahalalana mahasoa. Manaiky aho… ary nanome aingam-panahy ity tabilao manaraka ity momba ny fahatapahan'ny mpisera Twitter:
Fanamarihana: Raha te hanohitra ny maha-marina ireo antontan'isa ireo ianao dia vakio azafady ny ahy disclaimer.
Nampiasa ny Twitter aho tato anatin'ny roa taona lasa izay, dia mankasitraka ilay fitaovana fampahalalana hitako aho. Mieritreritra aho Twitter dia azo ampiasaina ho an'ny orinasa koa - fa ny mitombo ny feon'ny tabataba.
Ho an'ny vaovao ao amin'ny Twitter, ny tabataba mety ho marenina. Angamba izany no antony namantaran'i Nielsen vaovao vaovao Mpisera Twitter nandao ny serivisy atsy ho atsy. Tamin'ny voalohany, nihevitra ny sasany fa hiala amin'ny tranonkala ny mpampiasa ary hifindra amin'ny rindranasa, saingy Nielsen dia nanavao ny statistikan'izy ireo ary nanaporofo fa ny fitazonana mpampiasa vaovao dia mbola olana goavana.
Tags: Radio Marketing TechnologySocial Media Marketing
Douglas Karr Tuesday, May 12, 2009 Sunday, October 4, 2015
Ny orinasan-tambajotra sosialy
Marketing amin'ny grasshopper
May 13, 2009 amin'ny 7: 15 AM
Fanamarihana mahaliana toy izany!
Mitombo ny tahan'ny Twitter any Aostralia amin'ny taha mahavariana, ary niresaka momba ny zavatra hita tao Nielsen izahay tato ho ato.
Ny fotoana no hanaporofoana fa diso aho na tsia ………. na izany aza dia tsapako fa mpandray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy ny iray na mihoatra ny mpampiasa, mifanaraka tsara amin'ny My Space, Facebook, sns.
Ny fifangaroana amin'ny Linked In Twitterers dia manome antsika Prospect mihoatra ny ampy …………… .. karakarain'ny matihanina.
BTW Douglas (tiana holazaina amin'ny fomba tsara indrindra) Tsy hitako n'aiza n'aiza ny anaranao ka tsy fantatro hoe iza no nanoratra fampahalalana marina sy matihanina toy izany.
May 14, 2009 ao amin'ny 11: 20 PM
Ny sakaizako rehetra dia hihomehy anao tsy mahita ny anarako na aiza na aiza… leo ny nametaka ny anarako izy ireo HERA EO. 🙂
May 13, 2009 amin'ny 7: 23 AM
Rehefa nandinika tsara ny tranokalanao Doug …………. ary amin'ny fijerena faharoa ny pejy fipetrahana …………. Jamba tokoa aho!
Heveriko fa hankasitrahanao ity: -
Twitter ve no fiandohan'ny Web 3.0? http://budurl.com/whpm